Vidio - Ngụgụ nke Alaeze ahụ
Chebe ndị aka ha dị ọcha
Chere otu nkeji - roulette Russia
Nke a ọ bụ ọgwụgwụ? N'ajụjụ ọnụ Brian Holdsworth & Mark Mallett
Chere otu nkeji - Olee ndị bụ ezigbo ndị mgbasa ozi?
Chere a nkeji - Gịnị mere mgbochi eke?
Ị nwere onye iro na -ezighi ezi - Nkebi 1
Ị nwere onye iro na -ezighi ezi - Nkebi 2
Ịgbaso Sayensị? Akwụkwọ akụkọ
Ebili nke emegide Kraịst
Na Mbụ 1 of 2 Osote
Iningkọwa oke oke nke oge anyị
Oge Ebere - Akara nke Mbụ
Agha - Akara nke Abụọ
Njikọ akụ na ụba - Akara nke atọ
Njikọ mmekọrịta - Akara nke anọ
Mkpagbu - Akara nke Ise
Ingdọ aka na ntị - Akara nke isii
Anya nke oke ogu - akwara nke asaa
Nchigharị nke Onye Na-emegide Kraịst
Iwu Chukwu & Ubochi ato nke ochichiri
Chi ọbụbọ nke Olileanya
Ebee ka anyị nọ ugbu a?
Ọchịchị nke Ọnwụ
Na Mesaya nke ụwa
Oge Fatima bụ Ebe a
Dọ Aka ná Ntị Dị Ike
Kwadebe maka Mmụọ Nsọ
Gethsemane anyi di
Nọgide na Oké Nkume
Vidio ndị ọzọ
Na Mbụ 1 of 7 Osote
Onye Nchụ-aja ihe omimi na-ekwu maka ịdị-ọcha nke na-abịa
Echefula nraranye nke Russia na Ukraine taa nke akụkọ ihe mere eme! Otu esi esonyere na ihe aga eme.
Iji kwụsị Agha Ụwa nke Atọ, Satọdee ise nke mbụ nke Fatima ga-emerịrị ugbu a! (Emelitere)
Ihe Nzuzo Katolik Na-enweta Obi Ụtọ. Egbula oge n'ịgba ọsọ na Sacrament a!
N'ofe akwụkwọ akụkọ. Kedu ihe mere nnwere onwe ikwu okwu America?
Akwụkwọ nke Eluigwe nke Luisa Piccareta, akwụkwọ akụkọ ndụ 36 na-akụzi Uche Chineke
Mmezu dị ebube nke ekpere Nna anyi: ala eze Gi bia, Ka eme uche gi. . .
Okwu mmalite nke uche Chineke site n'aka Luisa Piccarreta - nke Fr. Jim Blount, SOLT.
Oge dị ngwa ngwa. Mee onwe gị na ezinụlọ gị doro anya nye Meri maka nchekwa na nduzi!
ANYỊ na-ebi na MATRIX. Nke a bụ ka ị ga-esi chọpụta nke ahụ.
Amụma Dị Ike nke Ọdịnihu Anyị, ma Atụla egwu!
Ngwa ngwa maka taa! 12pm-1pm BỤ oge AFỌMA NKE ỤWA
Enyemaka mmekọrịta nke anyị niile chọrọ! Nkebi nke 2 na Christine Bacon, "Dọkịta mmekọrịta."
Ndụmọdụ mmekọrịta kwesịrị ịma nke nwere ike ịrụ ọrụ ebube - Nkebi nke 1. Mụta ka nsọ pụtara.
Ihe omimi dị egwu (kekọrịta ndị nọ n'afọ iri na ụma!): NATIONAL 54 DAY ROSARY NOVENA ya na Fr. Blount na Christian
Ihe omimi dị ebube: NATIONAL 54 DAY ROSARY NOVENA ya na ndị Fada Blount.
Ihe omimi dị mwute: NATIONAL 54 DAY ROSARY NOVENA ya na ndị Fada Blount.
Joyful Mysteries e dekọrọ ndụ: NATIONAL 54 DAY ROSARY NOVENA ya na ndị Fada Blount.
Otu n'ime okwu na-akpali akpali nke oge anyị nke Fr. Jim Blount, SOLT
Gbasaa NOVENA ụbọchị 54 a maka obodo anyị n'oge nsogbu.